Jarmalka oo qaba in Astarasenika keliya la siiyo dadka 60 ka weyn xilli ay magac kale la baxayso - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Jarmalka oo qaba in Astarasenika keliya la siiyo dadka 60 ka weyn xilli ay magac kale la baxayso
Daawada yaraysa hargabka Karoona ayaa wadamo badan oo reer Yuruba diideen xilli Jarmalku hadda leeyahay hala siiyo keliya dadka ka weyn 60 jir. Wuxuu sidaas ku jira ayadoo la sheegayo in 10 qof u dhinteen kadib dhiiga oo guntamay.
Waxa ugu badan ee daawadan yaraysa aafada hargabka lagu helay ayaa ah inay dhiiga guntan ka dhinto kadibna qofku u dhinto xubnaha muhiimka oo istaaga, waxayse dhaqaatiirtu leeyihiin waxtarkeeda ayaa ka badan khasaaraheeda.
Wadamada aadka u qaatay sida Ingiriiska, Yurub oo dalal badana iyo Somaliya ayaa hadda ma jiro cid u dhimatey dhiiga oo xidhma xilli dhaqaatiir badan leeyihiin iskuma xidhna talaalka iyo dhiig xidhanka.
Dhinaca kale shierka Astarasenika ayaa go’aansastey inay magaca iska bedesho xilli magaceeda lala xiriirinayo dhiig guntanka si ay u ilaashato sumcadeeda.
Waxayna la baxday VAXSERVIA lamase garan karo kuwa raba inay dhulka la galaan maadaama uu jiro is NACAYB xun iyo dhaqaale la dirir ka dhexeeya wadamada YURUB ee daawadan isku bahaystey.